2019 Ego Tegharị Igo ugbu a na -eme ihe ntanetị oge NWT na oge (08.December.2019) | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 Ankara2019 Tiketị Elu Ahịa dị ugbu a na -eme ihe ntanetị na NWT na oge (08.December.2019)
08 / 11 / 2019 06 Ankara, 11 Bilecik, 26 Eskisehir, 34 Istanbul, 42 Konya, Central Anatolia Region, Usoro okporo ụzọ okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
2019 Pọtakọt Ulo elu ugbu a dị iche iche YakT Timetables na Oge: insgbọ oloko dị elu nke na-eme ka ndụ anyị dị mfe na njem ụgbọ elu na-aga n'ihu na-ejikọ obodo, ndị njem na ọdịbendị dị iche iche. A na-akwado ụgbọ oloko dị elu na-eje obodo dị iche iche nwere njiri njem dị iche iche na ụdị ụgbọ ala na nnukwu ofufe ma nwee atụmatụ teknụzụ dị elu. Ationgbọ njem TCDD (YHT) na mpaghara a mmelite niile na mmepe nke teknụzụ n'ụzọ kachasị ọsọ iji jikọta usoro ahụ na-enye gị ohere njem enweghị ike iru.
Njikọ Njikọ YHT
A na-eburu ụgbọ elu ọsọ ọsọ na Bursa, Antalya, Karaman site na TCDD forgbọ njem maka njem dị mfe na ahịrị YHT site na ụfọdụ obodo. Ihe ndị kasị dịrị ebe a na-adọba ọdụ dị ka anyị na-emekọrịta ahịa n'ụzọ dị otu a ma rute n'ọdụ ụgbọ oloko awara awara site na obodo ndị a. Njikọ ndị a:
Karaman Konya High Speed ​​Train Bus njikọ
Njikọ ụgbọ okporo ígwè Antalya Konya
Njikọ Bursa Eskişehir High Speed ​​Bus
Ndị nkuzi sitere na Ngalaba Mmụta nwere ikike iwepu ego nke 20 n'agbanyeghị ma ha onwe ha ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ọha. Nwepu ego ndi a gunyere ndi isi ya na onye enyemaka ndi isi, ndi ulo akwukwo na ulo akwukwo, na ndi nkuzi nke ndi mba Turkey ndi n’aru oru n’ime obodo ndi ozo.
Anyị achịkọtara n'okpuru ụzọ ụgbọ oloko dị elu a haziri ma rụọ ọrụ maka ụmụ amaala iru obodo ha ga-aga ngwa ngwa yana ụfọdụ njirimara nke ụgbọ oloko ndị a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ịnwere ike ịkpọ CDgbọ njem TCDD ma ọ bụ nwee ike ịmalite ịnụ ụtọ njem a dị mma na nke ọma site na ịzụta tiketi gị ozugbo na ọnụ ahịa akụ na ụba kacha mma na peeji ịzụta tiketi ịntanetị.
Oge Ọpụpụ Ugo Dị Oke ọsọ (YHT)
16 Site na July 2019;
Ankara Istanbul Train Speed ​​Speed, Ankara Njem 6 Rụọ ọrụ. Traingbọ okporo igwe dị elu nke Ankara-Istanbul na-apụ na Ankara na-akwụsị na Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit na Gebze na-akwụsị. Oge 4 nke nkeji 15 n'ime. Karagbọ elu Ankara-Istanbul anaghị akwụsị na nkwụsị ụfọdụ oge mgbe ụgbọ oloko ahụ nwere ike ibilite iche.
Angbọ okporo Ugbọ elu nke Ankara, Istanbul-Ankara na Ankara-Istanbul Njem 6 Rụọ ọrụ. Traingbọ ahụ na-apụ site na Istanbul Pendik gaa Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozuyuk, Eskisehir, Polatli na Sincan dịka ha na-aga Ankara Oge 4 nke nkeji 15 n'ime. Ebe ọ bụ na ụgbọ elu nke Istanbul-Ankara adịghị akwụsị na ụfọdụ nkwụsị, enwere ike ịdị iche na oge ọbịbịa nke ụgbọ ahụ.
Istanbul Ankara YHT Enyemaka pụrụ iche
Ankara Eskişehir High Speed ​​Train Eskişehir bụ otu n'ime nkwụsị na Line Ankara Line. Ọ ga-ekwe omume ịme njem 5 site n'usoro a. Na mgbakwunye, enwere eriri Ankara Eskişehir. Njem 6Ankara Eskişehir High Train Line Train bụ otu n'ime 11 kwa ụbọchị. Ebe ọ bụ na oge a bụ obere oge, ụgbọ epeepe adịghị n'ime ya. Ebe ọ bụ na ụgbọ okporo ígwè dị n'obodo, ị nwere ike ịga n'etiti Ankara na Eskişehir. Nche 1,5 ọganihu. Kama iji ụgbọ okporo ígwè gaa njem, ị nwekwara ike họrọ ahịrị Anlara Istanbul. Abụọ na-agafe otu nkwụsị ahụ.
Eskişehir Ankara Train Speed ​​Speed ​​bụ otu n'ime nkwụsị n'okporo ụzọ Eskişehir İstanbul Ankara. Ọ ga-ekwe omume ịme njem 5 site n'usoro a. Na mgbakwunye, e nwekwara ahịrị Eskişehir Ankara. Njem 6Lineki Train High Speed ​​Eskişehir Ankara bụ otu n'ime 11 kwa ụbọchị. Ebe ọ bụ na oge a bụ obere oge, ụgbọ epeepe adịghị n'ime ya. Ebe ọ bụ na ụgbọ okporo ígwè dị n'obodo, oge a na-enye ndị njem ezigbo ọrụ. Journey nkezi Nche 1,5 Ọ bụ-aga n'ihu.
Ankara Eskisehir YHT Enyemaka pụrụ iche
Ankara Konya High Speed ​​Train Njem 7 Rụọ ọrụ. Ogologo oge oge ụgbọ elu ndị a dị Oge 1 nke nkeji 55 Ọ bụ-aga n'ihu. Sincan na Polatli akwụsị. Enwere nhọrọ tiketi abụọ, ndị a bụ ọkọlọtọ ma na-agbanwe agbanwe. Otu n'ime ụgbọ oloko dị elu nke ụdị ụgbọ ala nke 2 bụ klas akụ na ụba xNUMX + 2 pulley na klaasị ahịa 2 + 2. Oge a dị mkpụmkpụ-oge, yabụ enweghị ụgbọ ala na nri.
Traya High Speed ​​Konya-Ankara Njem 7 Rụọ ọrụ. Ogologo oge oge ụgbọ elu ndị a dị Oge 1 nke nkeji 55 Ọ bụ-aga n'ihu. Polatlı na Sincan akwụsị. Enwere nhọrọ tiketi abụọ, ndị a bụ ọkọlọtọ ma na-agbanwe agbanwe. Otu n'ime ụgbọ oloko dị elu nke ụdị ụgbọ ala nke 2 bụ klas akụ na ụba xNUMX + 2 pulley na klaasị ahịa 2 + 2. Oge a dị mkpụmkpụ-oge, yabụ enweghị ụgbọ ala na nri.
Ankara Konya YHT Enyemaka pụrụ iche
Yagbọ okporo ígwè dị elu na Konya- Istanbul Njem 2 Ọ ọfiọkde. Oge ikpeazụ ụgbọ oloko ahụ bụ Istanbul Pendik. Nkezi oge Oge 4 nke nkeji 20 Ọ bụ-aga n'ihu. Nkwụsị ụgbọ okporoko Konya-Istanbul bụ Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Arifiye, Izmit na Gebze. Nwere ike ịzụta ụgbọ elu nwere nhọrọ ọkọlọtọ abụọ na mgbanwe mgbanwe yana 3 dị iche iche ụdị ụgbọ ala wagon. Traingbọ ahụ gụnyere akụ na ụba pulman, azụmaahịa pulman, ụgbọ ala azụmaahịa pulman na nri.
Kongbọ okporo ígwè dị elu nke Istanbul Konya kwa ụbọchị Njem 2 Ọ ọfiọkde. Ebe ikpeazụ ụgbọ oloko ahụ dị bụ Konya. Ogologo oge nke njem ụgbọ oloko Oge 4 nke nkeji 20mejuputakwa. -Gbọ okporo Ugbo elu nke Istanbul-Konya gafere Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozuyuk, Eskisehir dị iche iche. Nwere ike ịzụta ụgbọ elu nwere nhọrọ ọkọlọtọ abụọ na mgbanwe mgbanwe yana 3 dị iche iche ụdị ụgbọ ala wagon. Traingbọ ahụ gụnyere akụ na ụba pulman, azụmaahịa pulman, ụgbọ ala azụmaahịa pulman na nri. Ọnụahịa tiketi ụgbọ oloko dịgasị iche iche n'ụdị ụgbọ ala.
Istanbul Konya YHT Enyemaka pụrụ iche
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ịnwere ike ịkpọ ationgbọ njem TCDD (444 8 233) ma ọ bụ peeji ịzụta tiketi na ntanetị, ịnwere ike ịmalite ịnụ ụtọ njem a dị mma na nke ùgwù site na ịzụta tiketi gị ozugbo na ọnụ ahịa akụ na ụba.
Valid YHT maka njem site na ụbọchị 08.12.2019 Pịa ebe
Maka ụgbọ oloko YHT na Njikọ Bus Ebe 08.12.2019 Pịa ebe
Turkey TCDD Speed ​​Okporo ígwè Map
Levent Ozen ọ sịrị:
YHT - akụkọ banyere ọsọ ụgbọ oloko RAYHABERNwere ike iso!